Ithiyori zeMandalorian: Ngaba isizini 3 iya kuba liQela eliPhezulu laseMandalore? - Itv
Eyona Itv 'I-Mandalorian' i-Endgame inokuthi ilunge kakhulu ibe yiPlanethi-eSized Adventure
'I-Mandalorian' i-Endgame inokuthi ilunge kakhulu ibe yiPlanethi-eSized Adventure
(LR): Ukusukela uReeves (uMercedes Varnado) kunye noBo-Katan Kryze (Katee Sackoff) eLucasfilm UMandalorian .Ifoto nguLucasfilm / Disney +
Kuvakala ngathi izolo nje abaphulaphuli bebesaziswa kuTimothy Olyphant's Cobb Vanth kwiPremier 2 yePremier ithandwa kakhulu UMandalorian . Ukanti apha sonke sineentsuku nje ezimbalwa kude nesiphelo sexesha elitsha. Ixesha liqinisekile ukuba liyabhabha xa ooyise ababi beqhushumbisa bevuthela naziphi na izoyikiso koonyana babo abamkelekileyo abanovelwano ngohlaza. Njengamaxesha emiphanda yesi-2 ukuya kufutshane kwaye sonke silinde ngomphefumlo ukubhaqa ukuba iDin Djarin ( UPedro Pascal ) unokuhlangula u-Baby Yoda-ndithetha uMntwana-nyani, u-Grogu ekubanjweni ngu-Moff Gideon (Giancarlo Esposito), ngoku lixesha elilungileyo neliya kujonga ngaphaya kwesiphelo.
Akunakuphikwa ukuba iSizini 2 ibinguloliwe obalekayo wenkonzo yabalandeli eyenzelwe kakuhle ngenxa yothotho lwee-cameos kunye nokubonakala kwabalinganiswa abathandwa kakhulu ngabalandeli Idabi leenkwenkwezi Lore. Kodwa uLucasfilm unezicwangciso ezinobuchule kwaye ezinamabhongo Idabi leenkwenkwezi Indalo kwiDisney +. Akukho nto siyibonileyo iye yaba kukunciphisa nje iadrenaline. Kukho isizathu sayo yonke into, yiyo loo nto ndikholelwa ukuba iSizini 3 nangaphezulu sele zisetelwe.
IJedi usebenze njengokwazisa ngokusebenza kuka-Ahsoka Tano (Rosario Dawson), ngoku oqinisekisiweyo ukuba uzobalaselisa eyakhe uthotho spinoff . Ixesha lesibini le-2 elijolise ngokuqhubekayo kwiCara Dune (uGina Carano) kulindeleke ukuba lihlawulwe kulwaziso olusandula ukubhengezwa Umngcipheko weRiphabhlikhi . Ukubuya kukaBoba Fett (uTemuera Morrison) kuza phakathi kwamarhe atyhutyha uthotho lwee-spinoff zakhe kwaye unxibelelana kakuhle ne-action-action debut yomlinganiswa othandwa ngumlandeli uBo-Katan (Katee Sackhoff). Konke kunxibelelane ngabom nokwakha kuqala okuphawulwe ngu ICinelinx's Jordan House .
Indlalifa Wenza kwacaca ukuba uBo-Katan, omnye umntu waseMandalorian, ulandela i-Darksaber, into ebalulekileyo yabantu baseMandalorian ekhoyo ngoku kuMoff Gideon. Kuyo yonke imbonakalo yakhe yoopopayi e Iimfazwe zeClone kwaye Abavukeli , umlinganiswa kudala egxile kuphela ekususeni ubukho be-Imperial kwiplanethi yakhe yaseMandalore. Nangona sele kukhankanyiwe, asazi kangako ngendlela ethile xa kufikwa kwi -Great Purge, ethathwa njengokuhlaselwa okwenzakalisayo yi-Empire eMandalore ekhokelele ekuhlaleni kwabo. Ayizothusa into yokumbona ebuya ekugqibeleni ezokujongana noGidion kwaye aqhubeke nokubeka isiseko samaxesha exesha elizayo.
Iintsapho zaseMandalorian ziyaqhekeka, zahlulwe zombini ngokwendawo yegalakthi nangokomxholo. Jonga nje ukuba lahluke njani ihlelo lamaNevarro amajoni aseMandalorian avela eBo-Katan nakwii-Owls zakhe zasebusuku. Utyhila kuDin ukuba ungowecandelo elinobugwenxa (aBantwana beWatch) kwaye uninzi lweentlobo zeMandalorian lukhona kwinqanaba lefilosofi. Injongo yakhe kukubuyisa izixhobo, ukubonelelwa, kunye nezixhobo ezivela kwimikhosi yasebukhosini ngeli xesha lonyaka ukuze kuqokelelwe amandla, kumanyaniswe izizwe ezahlukeneyo, kwaye kubuyiswe ilizwe laseMandalorian. UDin ngokucacileyo ukhathazeke ngakumbi ngo-Baby Yoda okwangoku. Kodwa ucinga ukuba izisombululo kwisiphelo sayo, igorha elihambahambayo elinokuhamba lijoyine iBo-Katan (kwaye mhlawumbi lifumane omnye uMandalorian uBoba Fett) ngeli bali libalaseleyo.
Ukunceda ukudibanisa abantu bakhe ngaphandle kokungafani kwabo okwahlukileyo kwaye baphinde bathabathe iMandalore iya kuba yeyona ndawo iphambili yokuqhubela phambili, kodwa inye ayizukunyathela kwiinzwane ezinkulu Idabi leenkwenkwezi I-saga ekhulayo ngeli xesha (uMyalelo wokuqala ngokuchasene neRiphabhlikhi eNtsha). Kuya kunyanzela iDin ukuba ikhethwe yodwa iye kuqokelelo olukhulu lwenkcubeko efanayo. Ukuthanda kukaMandalore kweziseko ngokuqinisekileyo ngekhe kwenzakalise amathuba kaGrogu okuba afaneleke. Ixesha ngalinye le-TV ye-blockbuster ineeseti zalo zemiceli mngeni kunye neendawo ezimbi ezimbi. Ukuphinda usebenze kwakhona kuthotho olujikeleze umnqweno wenkululeko yeplanethi kunye noxolo ngokuhambelana nophuhliso lwebali lo mboniso ubupheka.
Njengokuba silidla ngentumekelelo isahluko sokugqibela seXesha lesi-2, qaphela nawaphi na amanqaku kunye nezalathiso kwikamva loluhlu. Musa ukumangaliswa ukuba imfazwe ye-Mandalorian iza kugxila ngakumbi.
Abaxhasi abaliqela balahle uSean Hannity phakathi koKhuselo lukaRoy Moore
I-poll: Uninzi lwabavoti abacingi ukuba ukutyunjwa kukaClinton kuyimbali
'Igazi lokwenyani' Ixesha lesi-7, Isiqendu 2: Abazidubuli iiVampires, Ngaba bayazi?
Umbonisi we-2017 PR Power 50
eyona ndawo yokuthenga imbewu yentsangu
umongikazi jackie dr o hara
kwakutheni ukuze ipark yasemazantsi iyeke ukubulala ukenny
Dr ogqiba ixesha lokugqibela ngo-2017
Iimfazwe zeenkwenkwezi iindleko zokugqibela zejedi